Haweeney Soomaali Ah Oo Ku Geeriyootay Weerar Daalibaan KA Geysatay Afgaanistaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Haweeney Soomaali Ah Oo Ku Geeriyootay Weerar Daalibaan KA Geysatay Afgaanistaan
19th January 2014 A warsame Af Soomaali 0
Kabul – Mareeg.com: Gabar Soomaaliyeed, hase ahaatee heysatay dhalashada dalka Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Basra Farax Hassan ayaa ka mid noqotay dad ku geeriyooday weerar Ismiidaamin ah iyo iska horimaad toos ah isugu jiray, kaasoo jimcihii lasoo dhaafay Dalibaan ku qaaday baar ku yaalla caasimdda Afgaanistaan ee Kabul.
Weerarka oo ka dhacay maqaaxi lagu magacaabo Taverna du Liban oo ku taala magaalada xaafadda Kabul’s Wazir Akbar Khan ee magaalada Kabul, ayna ku jireen dadka ajaanib ah, diblomaasiyiin, weriyaal, iyo shaqaale hay’ado samafal ayaa ku geeriyooday 21 qof ay ka mid ahayd gabar Soomaaliyeed.
Gadha Soomaalida ah ee ku dhimatay weerarkaas ayaa la sheegay iney la dhalatay qoraaga caanka ah ee Soomaaliyeen Nuuradiin Faarax.
Basra oo heysatay dhalashada Mareykanka ayaa ka shaqeyneysay Hey’adda UNICEF, gaar ahaan qeybta Nafaqada, waxayna ka mid aheyd shaqaalaha rayidka ee Qaramada Midoobey ee ka howl galayay dalka Afghanistan.
Saraakiisha Booliska waxay sheegeen in weerarka ku dhinteen 21 qof oo 13 kamid ah ayaa Ajaanib ahaa, kuwaas oo 4 kamid ah ay ahaayeen haween, waxaa kale oo ka mid ahaa wakiilkii Hay’addah IMF ee dalka Afghanistan Wabel Abdallah oo u dhashey dalka Lubnaan.
Dadka kale, ku geeriyooday qaraxa waxay ahaayeen 4 Shaqaale u shaqeynayay Hay’adda Qaramada Midoobay iyo muwaadinin kale u kala dhashey waddamada Britain, Kanada, Ruushka, Denmark, Lubnaan, Pakistaan iyo Somali-American.
Weerarka lagu laayey dadkaan ay ku jirtay gabadha Soomaaliyeed ayaa la mid ah kuwa horay uga dhacay baarar ku yaalla magaalada Muqdisho, kuwaasoo Alshabaab geysteen, waxaana Alshabaab iyo Daalibaan wadaagaan afkaaraha dagaalka.
Baay: Haween Ka Shaqeynayey Urur Maxalli Ah Oo La Afduubay